သတိပြုရမည့် အခြေအနေများနှင့် ကျုပ်တို့လုပ်နိုင်တာတွေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ – Federal Journal
သတိပြုရမည့် အခြေအနေများနှင့် ကျုပ်တို့လုပ်နိုင်တာတွေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ
သတိပြုရမည့် အခြေအနေများနှင့် ကျုပ်တို့လုပ်နိုင်တာတွေ
အောက်ပါအခြေအနေတို့တွင် သမိုင်းဖြစ်ရပ်ဆိုးများ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရယ် ရှိသည်။
(၃) တရားလက်လွတ်ပြမူသူတို့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေခြင်း
(၈) တစ်ဖက်စွန်းဆီတွင် ရပ်တည်လာကြခြင်းများ
၁။ စစ်/ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေခြင်း
အာမေနီးယား ဂျီနိုဆိုက်သည် ပထမကမ္ဘာစစ်နောက်ခံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ နာဇီတို့၏ မီးလောင်တိုက်သွင်းမှုသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ခံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင်မူ ဂျီနိုဆိုက်များ၊ ကြီးမားသော သုတ်သင်ချေမှုန်းမှုများသည် ပြည်တွင်းစစ်နောက်ခံတွင် အဖြစ်များလာသည်။ ဘော့စနီးယား၊ ရဝမ်းဒါ၊ ဒါဖာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားတို့သည် နမူနာများဖြစ်ကြသည်။
“ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေက အာမေးနီးယားတွေကို ရှင်းပစ်ဖို့ တူရကီအစိုးရ စောင့်နေတဲ့အွင့်အရေးဖြစ်နေတယ်” ဟု အာမေးနီးယား ဂျီနိုဆိုက်(၁၉၁၅-၁၆)ကို မြင်တွေ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူ အမေရိကန်သံအမတ် ‘မော်ဂန်’ဆိုသူက ရေးသားခဲ့သည်။ ‘ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကာလမှာ မရနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ အများကြီးကို စစ်အတွင်းမှာရလာတော့မယ်’ဟု နာဇီ ခေါင်းဆောင် ‘ဂိုးဘဲလ်’က သူ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်း(၁၉၄၂- မတ်လ)တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ စစ်ပွဲဟူသည် တရားဝင်လူသတ်ခွင့်ရသော အခင်းအကျင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ တိုက်ခိုက်ရန် ဆင့်ခေါ်ခံရသောအခါ ယဉ်ကျေးမှုစည်းဘောင်အတွင်းမှ ပြုမူကျင့်ကြံပုံများ ကျိုးပေါက်လေ့ ရှိသည်။ ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများ ကျိုးပေါက်ပျောက်ကွယ်သည်သာမက အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကို လက်ခံခွင့်ပြုသည့် အလေ့အထများပါ အစားထိုးလာလေ့ရှိသည်။ စစ်ပွဲများတွင် ‘ငါတို့၊ သူတို့’ သို့မဟုတ် ‘မိတ်ဆွေ၊ ရန်သူ’ဟူသော အကွဲအပြဲပိုမိုကြီးမားလာလေ့ရှိသည်။ ရန်သူကို လူအဖြစ်မှ နေ၍ အရာဝတ္ထုအဖြစ် ရွေ့လျားစေပြီး၊ ကျင့်ဝတ်စက်ဝိုင်းအတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြမြဲဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲကို ဦးဆောင်သူများ၊ ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားများကလည်း အတွင်းရန်သူ၊ အပြင်ရန်သူ ဟူသော စကားများဖြင့် ချဲ့ထွင်ဖော်ပြလေ့ ရှိသည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ချဲ့ထွင်ဖော်ပြရာတွင် သာမန်ပြည်သူအရပ်သားများပါ ရန်သူ့စာရင်းတွင် ပါဝင်သွားတတ်သည်။
ထိုအခြေအနေသည် ဂျီနိုဆိုက်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိစေသည့် အဓိကအခြေအနေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖိနှိပ်ခံရသည့် အစုအဖွဲ့များအနေနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိတော့သောအခါ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများဆီသို့ ရွေ့လျားရောက်ရှိသွားတော့သည်။ ထိုအခါအစိုးရ/စစ်တပ် စသည်တို့၏ဖိနှိပ်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာကာ အဆိုးကျော့သံသရာအဖြစ် ကြီးမားသော လူသတ်ပွဲများ၊ ဂျီနိုဆိုက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားတတ်ကြသည်။
ဂွာတီမာလာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရနှိပ်ကွပ်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ခံကြရသည့် ဒေသခံ မာယာလူမျိုးတို့သည် တော်လှန်သည့် အဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြည့်ဥပမာလည်းရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အခြားနမူနာများစွာလည်းရှိသည်။
ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများတွင် လက်ယဉ်သူအရပ်သားများ(တစ်နည်းအားဖြင့်) အကြမ်းဖက်မှုကို စိတ်လိုလက်ရလုပ်မည့် ပြည်သူ့စစ်များ၊ လူမိုက်အဖွဲ့များ ကြေးစားများကိုလည်း ခေါ်ယူသုံးစ ကြလေ့ရှိသည်။ ဤသည်မှာလည်း အကြမ်းဖက်မှု ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းရန် ထောက်ကူသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
စစ်ဖြစ်နေသောအခါ ရန်သူ့နယ်မြေသူသော ရည်ညွှန်းချက်များပေါ်လာသည်။ ထိုနယ်မြေ တွင် လက်ဦးရန်၊ အပြတ်ရှင်းရန် အား လုံးကို သံသယထားရန်ဟူသော အပြုအမူများဆီသို့ ဦးတည်သွားသည်။ ထိုမှနေ၍ သိမ်းကျုံးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများဆီသို့ ကူးပြောင်းသွား နိုင်ပြန်သည်။
စစ်ဖြစ်နေသည့်အခြေအနေက ရွှေ့ပြောင်းနေရာချခွင့်၊ အင်အားဖြည့်တင်းခွင့်ရစေသည်။ အရပ်သားများ၊ ပြည်သူ့စစ်များကို လက် နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်သည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ဥပဒေများ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ဆိုင်းငံ့ရန် အခွင့်အရေးရသည်။ မီဒီယာကို အမှောင်ချနိုင်သည်။ အထက်ပါလုပ်ရပ်များကို လုံခြုံရေးအတွက် ပဲလေဟူ၍ ပြည်သူအများကပင် လက်သင့်ခံသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အရပ်သားအစိုးရများသည်လည်း စစ်ခေါင်းဆောင်များကို နေရာပေး၍ အရပ်ဖက်မှ စီမံခွင့်ကို ကန့်သတ်ရုတ်သိမ်းပေးခြင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
အနှစ်ချုပ်မှာ စစ်/ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေသည် စစ်သားအရပ်သားဟူသော မျဉ်းကြောင်း ကို ပျောက်ကွယ်စေသဖြင့် အန္တရာယ် ကြီး လှသော အခြေအနေဖြစ်သည်။
အတိတ်ကာလတွင် ပဋိပက္ခများ၊ တင်းမာမှုများအား အင်အားဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ပါက အနာဂတ်အတွက် စိတ်အေးစရာမရှိလှပေ။ အတိတ်တွင် နှိပ်ကွပ်ဖြေရှင်း၍ အောင်မြင်ခဲ့သည် ဆိုလျှင် ပို၍စိတ်ပူစရာဖြစ်သည်။ အခြားနည်းများဖြင့် အဖြေရှာမည့်အစား နှိပ်ကွပ်သည့် နည်းလမ်းဟောင်းကိုပင် ဆက်သုံးဖွယ်ရှိသည်။
အမှန်တွင်မူ နှိပ်ကွပ်ခံရ၍ ငြိမ်သက်သွားခြင်းကို ပြေလည်သွားခြင်းဟု ယူဆ၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ နှိပ်ကွပ်ခံရသည့်အဖွဲ့များသည် တုံ့ပြန်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကို စောင့်ကြမည်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသော အကြမ်းဖက်မှုများဆီသို့ ရောက်ရှိသွားည နိုင်သည်။
အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုများနှင့် အလေ့ကျခြင်းပြဿနာသည် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်သာမက အောက်ခြေအထိပျံ့နှံလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ညွှန်ကြားချက် သိသိသာသာ မရှိသေး စေကာမူ အောက်ခြေတွင် အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ကြီးမာသောအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးသည့်နောက်တွင် ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူအားလုံးတွင် အမှတ်ရမှုပုံစံအမျိုးမျိုး ကျန်ရှိနေခဲ့တတ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များက ထိုအခြေအနေကို အသုံးချရန် ကြိုးပမ်းရာမှလည်း အကြမ်းဖက်မှုများ တစ်ကျော့ပြန်လာ တတ်သည်။
၃။ တရားလက်လွတ်ပြုမူသူတို့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေခြင်း
အကြမ်းဖက်မှု၊ သတ်ဖြတ်သုတ်သင်မှုများ ပေါ်လာသည့်အခါ အစိုးရက အရေးယူရမည်။ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်သူလူထုမှ ထိုသို့သောအပြုအမူများကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပေးကြရမည်။ ထိုသို့သောအပြုအမူများကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပေးကြရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အစိုးရကလည်း အရေးယူရန် ပျက်ကွက်၊ ပြည်သူကလည်း မသိကျိုးကျွံပြုထားသောအခါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့မှာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေသည့် အခြေအနေများဖြစ်ထွန်းလာသည်။ “ငါတို့လည်းလွန်ကျူးလို့ရတယ်” ဟူသော ယူဆချက်များ ပေါ်လာနိုင်သည်။ လွန်ကျူးခဲ့သူတို့ကလည်း နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်ရန် ဝန်လေးလိမ့်မည်မဟုတ်တော့။ ခံခဲ့ရသူတို့ကလည်း တရားမျှတမှုမရသည့်အပေါ် ဒေါသနှင့် လက်စားချေလိုစိတ်ကြီးစိုးနေလိမ့်မည်။ တရားဥပဒေမစိုးမိုးခြင်းနှင့် အပြစ်ရှိသူတို့ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရနေသည့် စနစ်၏ရလဒ်သည် ပိုမိုကြီးမားသော ပေါက်ကွဲမှုများဆီသို့ ဦးတည်စေတော့သည်။
မိမိလုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ခံရန်မလို၊ အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမည်ကို စိုးရိမ်းစရာ မလိုသည့်အခါ လက်နက်၊ အာဏာယန္တယားမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့် အစွန်းရောက်ရန် လွယ်ကူ သွားလေ့ရှိသည်။
၄။ အစွန်းရောက် အယူဝါဒများ အားကောင်းလာခြင်း
ကွန်မြူနစ်ဝါဒနောက်ခံတွင်ဖြစ်ခဲ့သော ကမ္ဘောဒီးယားဂျီနိုဆိုက်၊ တူရကီအမျိုးသားရေး ဝါဒနောက်ခံတွင် ကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
မည်သူတို့ကို နှိမ်နှင်းရမည်၊ မည်သူတို့ကို ကာကွက်ရမည်ဟူသော အာဏာပိုင်တို့၏ တွက်ကိန်းများသည် သူတို့စွဲကိုင်ထားသော အယူဝါဒများမှ လာလေ့ရှိသည်။
အစွန်းရောက်အယူဝါဒဆိုရာတွင် နိုင်ငံရေးအယူဝါဒများသာမက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အယူဝါဒများလည်းပါဝင်သည်။ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၏ လက်သည်တရားခံမှာ မည်သည့်အုပ်စုဖြစ်သည်ဟု တံဆိပ်ကပ်ပြလေ့ရှိသော အယူဝါဒတိုင်းသည် အကြမ်းဖက်မှုကြီးများ ဆီသို့ ဦးတည်သွားလေ့ရှိကြသည်။
အယူဝါဒတို့တွင် ထောက်ခံသူ၊ ကန့်ကွက်သူတို့ ရှိမြဲဖြစ်သည်။ မထောက်ခံဆန့်ကျင်သူများ သို့မဟုတ် မိမိတို့၏ ဦးဆောင်မှုနောက် မလိုက်သူများကို ရန်သူဟုသတ်မှတ်ရန်လည်း မခဲယဉ်း ပေ။ မိမိတို့အစုအဖွဲ့၏ သိမှတ်ပုံ(အမျိုး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒ)ကို ကာကွယ်ရမည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မိမိအစုအဖွဲ့များသာရှိသည့် သီးသန့်ကမ္ဘာတည်ဆောက်ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း အစွန်းရောက်အယူဝါဒသမားများက ကြွေးကြော်လှုပ်ရှားလေ့ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် အစွန်းရောက်အယူဝါဒနှင့် ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတို့ တွဲစပ်လျက်ရှိတတ်သည်။
အယူဝါဒရေးရာ ပြင်းထန်မှုက မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စကိုမဆို တင်းကျပ်သည်။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မှုပြုသည်။ အကြောင်းအရာများတွင် အဖြူအမည်းနှစ်ခုသာရှိသည်ဟု ယူဆ သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အမ္ဘာတွင်ဖြစ်ခဲ့သမျှ ဂျီနိုဆိုက်များ၌ အယူဝဒါပြင်းထန်မှု၏ တွန်းအားများ ပါဝင်သည်သာ ဖြစ်သည်။
၅။ အာဏာစနစ်နှင့် အာဏာရှင်စရိုက်ကြီးစိုးနေခြင်း
အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် အာဏာရှင်စရိုက်ဖက်သို့ ယိုင်သည့်အစိုးရများတွင် စိတ်လိုလက်ရ အင်အားသုံးနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိနေလေ့ရှိသည်။ အင်အားနှင့်အာဏာကို အထိန်းအကွပ် ပြုနိုင်သည့် အခြေအနေ များများစားစား မရှိပေ။
အာဏာကို ကန့်သတ်သည့် အနေအထားမရှိလေ ခေါင်းဆောင်နှင့်အာဏာပိုင်လူတစ်စု ထင်ရာစိုင်းရန် အခွင့်အရေးရလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာဏာရှင်စနစ်တိုင်းသည် ကျိုးနွံနာခံ သော ဗျူရိုကရေစီယန္တယားကို တည်ထောင်လေ့ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ခွဲဝေလုပ်ကိုင်သည်မှာ ဗျူရိုကရေစီသဘော သဘာဝဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည့် ဆုတ်ယုတ်မှုများကို ပင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အလိုက် လုပ်ကိုင်စေသည့်အခါ ငြင်းဆိုခုခံမှုနည်းသွားသည်။ ဗျူရိုကရေစီသည် လူတို့၏ကိုယ်ကျင့်သီလကို အိပ်ဆေးကျွေးရန် အထောက်အပံ့ပြုသည်။ (Bureaucracy Provides the moral sleeping pills) ဟုပင် ရည်ညွှန်းကြသည်။ အာဏာရှင်စနစ်သည် ဤအခြေအနေကို အသုံးချ၍ ဆိုးယုတ်မှုများ ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။
ဆက်စပ်နေသော အခြေအနေတစ်ခုမှာ အာဏာရှင်မှ ဒီမိုကရေစီသို့ အကူးအပြောင်း တွင်လည်း အန္တရာယ်များတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဏာကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင် လိုသောအခါ၊ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်လိုသောအခါ၊ အထက်စီးရသောလူတန်းစားသည် ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် တုံ့ပြန်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တစ်မျိုးမှာ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖန်တီးကာ ရှုပ်ထွေးစေသည့်နည်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်မျိုးမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် အင်အားတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးမှာပမာဏ ကြီးမားသော အကြမ်းဖက်မှုဆီ တိုးဝင်သွားမည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လက်ထဲတွင် အာဏာစုပြုံနေပြီး ထိုသူက အခြားသောလူမျိုး၊ အစုအဖွဲ့တို့ကို မုန်းတီးသူဖြစ်နေသောအခါ သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုများဖြစ်လာမည့် အန္တရာယ်ကြီး လာသည်။
၆။ ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် မူဝါဒများကျင့်သုံးခြင်း
အချို့သော လူအစုအဖွဲ့များကို မိမိတို့၏ကိုယ်ကျင့် တရားစံနှုန်းအတွင်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်မလို။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူတို့၏ဖြစ်တည်မှုကို ထည့်တွက်ရန်မလို။ ဖယ်ထုတ် ဖယ်ရှားထားရမည်။ နေရာပေး၍ မရဟူသော ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်မူဝါဒများ အရှိန်မြင့်လာလျှင် အကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် လူများစုက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဖြစ်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည့်အခါ နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံမှုရရန်အတွက် ခေါင်းဆောင် များသည် တစ်ဖက်သတ်ဖိနှိပ်မှုများကို ပြုလာနိုင်သည်။ ခွဲခြားခံရသူဖက်က အကြမ်းဖက် တုံ့ပြန်သောအခါတွင်လည်း ထိုတုံ့ပြန်မှုထက် အဆများစွာပိုကြီးသော အင်းအားဖြင့် တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် မူဝါဒများကျင့်သုံးသည့်အခါ ထိုမူဝါဒများကို အင်အားဖြင့် သွတ်သွင်း အကောင်အထည်ဖော်ကြရသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှသည် အကြမ်းဖက်မှုသို့ အလွယ်တကူ ကူးပြောင်းရန် မခက်ခဲလှပေ။
ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်မူဝါဒများဖြင့် လူများကြိုက် ထောက်ခံမှုကို ရနိုင်သည့်အခါ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများသည် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝှိုက်၍ ထိုမူဝါဒများကို အားပေးကြသည်။ ရလဒ်မှာ ခွင့်တူညီမျှမဟုတ်တော့ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး ပုံပျက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရက ဦးဆောင်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကျင့်သုံးသော နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။
အခြေခံအားဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသည် ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားသည့် ပုံစံပင်ဖြစ်သည် ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားမှုမှသည် ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းသုတ်သင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြီးမားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် မကျေနပ်မှုများ မခံအရပ်နိုင်မှုများ ကျယ်ပြန့်နေမည်သာဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော အကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် ရေခံမြေခံဖြစ်နေလိမ့်မည်။
၇။ စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်ပြဿနာများ
စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းမှု ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟပ်မှု ကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း မကျေနပ်ချက်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်လာသောအခါ အာဏာပိုင်တို့က မည်သူ့ကြောင့် အမည်ဝါကြောင့်ဟု လက်ညှိထိုး တရားခံရှာလေ့ရှိသည်။ အကျပ်အတည်းတွင် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံများကို စဉ်ခေါ်သည့် အောက်ခြေလှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ လူမျိုးရေးနှင့် လူတန်းစားအကြမ်းဖက်မှုသို့ ပြောင်းလာတတ်သည် နိုင်ငံရေးသမားများက ထိုအခြေအနေကို အသုံးချခြင်း၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် လမ်းလွှဲခြင်းသည်လည်း ဖြစ်လျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုသည် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုမှသည် အကြမ်းဖက်အာဏာချုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများဆီသို့ ဦးတည်တတ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်းလည်း လူမျိုးစုတို့၏ စီးပွားရေးနှင့် သယံဇာတရပိုင်ခွင့်များကို ဖြည့်နှိပ်ရာမှ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်များတွင် စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ် သောကိစ္စများ ပါဝင်နေတတ်သည်။
၈။ တစ်ဖက်စွန်းဆီတွင် ရပ်တည်လာကြခြင်းများ
ပုံမှန်အားဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် အစွန်းနှစ်ဖက်နှင့် လူနည်းစုနှင့်အလယ်တွင် လူအများစုရှိနေတတ်သည်။ သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲမှုများ ရှိသော်လည်း အရေးကြီးကိစ္စများတွင် သဘောတူကြသည့် ရွှေ့လျားပြောင်းလဲရပ်တည်မှုများ ရှိတတ်သည်။ တရားသေဆုပ်ကိုင်မှု မပြင်းထန်းသည့် သဘောကို ပြသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေမှသည် လူအများစုက တစ်ဖက်စွန်းဆီတွင် ရပ်တည်၍ ဘုံသဘောတူသည့်ကိစ္စများ နည်းပါးလာသည့်အနေအထားကို သတိထားကြရသည်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာလျှင် ထောက်ခံသည် သို့မဟုတ် ကန့်ကွပ်သည်ဟူသော အသေဆုပ်ကိုင်ရပ်တည်ချက်သာရှိသည်။ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ရန်သူဟူ၍ သဘောထားသည် အဘယ်ကြောင့် ကန့်ကွက်သင့်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ထောက်ခံသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးမှုမရှိ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ထိတိုက်တွက်လျှင် (ဥပမာ-ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲနှင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ သွားဆုံမည့်ကြလျှင်) ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်ရန်သာ အသင့်ဖြစ်နေသည်။ အစိုးရများ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကလည်း မိမိတို့နောက်လိုက်များ၏ အကြွင်းမဲ့နာခံမှုကို တောင်းဆို၍ အစွန်းရောက်မှုဆီ တွန်းပို့သည်။ ဤသို့သော တစ်ဖက်စွန်းဆီတွင် ရပ်တည်လာခြင်း (Polarization) အခြေအနေများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကြမ်းဖက်ပေါက်ကွဲမှုများဆီ ဆွဲခေါ်သွားတတ်သည်။
ပြိုင်ဖက်အုပ်စုများသည်လည်း မိမိတို့ကဲ့သို့ပင် လူသားများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့၏တရားဝင်ဖြစ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရမည်ဟူသော ခံယူချက်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန် လမ်းစဖြစ်သည်။ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြင်းများရှိသော်လည်း လူသားဖြစ်ခြင်းဟူသော တူညီသည့်သဘောကို လက်ခံကြရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တရားမဝင်ဖြစ်အောင် ပြောဆိုခြင်းများ၊ လူအဖြစ်အမြင်နိုင်အောင် ပြောဆိုခြင်းများကို ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများအနေနှင့် စောင့်ကြည့်သတိပေးနေရမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရာတွင် အုပ်စုတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရကြစေရန် ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အညီအမျှပြုမူ ဆက်ဆံခံရသည်ဟု ခံစားနိုင်ကြရန်ဟူသည် အုပ်စုတစ်ခုကနေ အပေါ်စီးကနေ၍ ပြုမူဆက်ဆံနေမျှ ချောမွေ့သော ဆက်ဆံရေးဖြစ်ရန် မလွယ်ကူပေ။
အခြားတစ်ဖက်မှ အုပ်စုသည် မိမိတို့အုပ်စုကဲ့သို့ပင် အမျိုးမျိုးအစားစားသော လူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သဘောထားပျော့ပြောင်းသူများရှိသလို၊ သဘောထားတင်းမာသူများလည်း ရှိနိုင်သည်။ အခြားအုပ်စုကို ရှုမြင်သောအခါ တစ်သွေးတစ်သံ၊ တစ်ပုံစံတည်းဟု ကောက်ချက်မဆွဲမိရန် လိုသည်။ အခြားအုပ်စုမှ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ လုပ်ရပ်သည်လည်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ရှိမရှိ ဝေဖန်ထောက်ရှုရန်လိုသည်။ မည်သို့သော အခြေအနေတွင်ပင်ဖြစ်စေ အခြားအုပ်စုတွင် မိမိတို့ကဲ့သို့ပင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖွေရှာလိုသူများရှိမည်ကို တွေးဆဆော်ဩရန်လိုသည်။
အခြားတစ်ဖက်မှအုပ်စုသည် လူမဟုတ်သူများ၊ လူအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုထိုက်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူသားအစုအဖွဲ့ဟု ပြောင်းလဲရှုမြင်နိုင်ရမည်။ အခြားအုပ်စုသည် မိမိတို့ကဲ့သိုပင် မိခင်များ၊ သားသမီးများ စသည့် လူသားဆန်မှု အစုအဝေးကြီးဖြစ်သည်။ မိမိတို့အုပ်စုကဲ့သို့ပင် ဆိုးမိုက်သူခြွင်းချက်များလည်း ရှိလိမ့်မည်။ ပဠိပက္ခပြင်းထန်သော ကာလအတွင်း ပြင်ပအုပ်စုများကို တရားမဝင်ဖြစ်စေခြင်း၊ လူအဖြစ်မှလျောကျစေခြင်း၊ တစ်ပုံစံတည်း တစ်စုတစ်ဖွဲ့တည်းဟု မြင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်မှာ တစ်ဖက်အုပ်စု၏ လူသားဆန်သော ဖြစ်တည်းမှုများကို မေ့လျော့ကာ ချေမှုန်းရမည့်ရန်သူဟူသော အမြင်ခိုင်မာလာတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအမြင်များကို တစ်ဆင့်ချင်းပြောင်းလဲပြုပြင်၍ လူသားဂုဏ်ရည်ပြန်လည်မျှဝေရန် လိုအပ်သည်။
၅။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း (Trust)
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကအခက်အခဲမှာ မိမိယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားပြု၍ အမြတ်ထုတ်ခံရမည့် အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဖက်ဖက်မှ ယုံကြည်မှုဖြင့် လက်ကမ်းမှု မပြုမချင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအဖြေရှာရန် မလွယ်ကူနိုင်ပေ။ အတော်အတန်အန္တရာယ်ရှိသော်လည်း ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်နိုင်ခြေမရှိလျှင် မိမိဖက်မှစတင်၍ ယုံကြည်မှု ကမ်းလှမ်းတည်ဆောက်ရန် အကြံပြုလေ့ရှိကြသည်။ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုမှနေ၍ ကျယ်ပြန့်သောယုံကြည်မှု တည်ဆောက်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ယုံကြည်မှုဟူသည်မှာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ လုံးလုံးလျားလျား ယုံကြည်မှုဟူသည်မှာ ပြင်ပအုပ်စုအနေနှင့် အနာဂတ်တွင်လည်း မိမိတို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နိုင်သောအခါတွင် ဖြစ်တည်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လည်း ပြင်ပအုပ်စုက မိမိတို့အပေါ် အရှည်သဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်နိုင်သည့်အခါတွင် ရေရှည်တည်သော ယုံကြည်မှုကို မရနိုင်ပါ။
(Positive Expectation and Lack of Negative Expectations about Future; behaviors of the rival)
ပိုကောင်းသည့်အနာဂတ် ဖြစ်တည်နိုင်သည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ရှိမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်နိုင်ခြေရှိမှမှသာ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြေလျော့မှု အခြေအနေသစ်များဆီသို့ စမ်းသပ်လျှောက်လှမ်းလိုမှု စသည့်အခြေအနေများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မည်။
မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တည်သောအခါ ပစ္စုပ္ပန်တွင် ပါရှိခဲ့သည့် အခြေအနေတို့နှင့်ပါ ကွဲပြားသည့် တွေးကျန်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို ရှိစေသည်။ Hope enbles people to imagineafuture that is differend from the past and presend.
လက်ရှိအခြေအနေတို့သည် မည်သို့မျှပြောင်းလဲနိုင်စရာ မရှိဟူသော မျှောက်လင့်ချက်မဲ့သည့်စိတ်ဝင်ရောက်သွားသောအခါ အများပြည်သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ရာတွန်းတိုက် လှုပ်ရှားမှုပြုရန် စိတ်မထက်သန်တော့ချေ။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် နိုးထလှုပ်ရှားလာအောင် ဆော်ဩကြရသည်။
၇။ ဘုံမြင်ကွင်းအနာဂတ်သစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း(Creating New Common Vision)
ဖက်ပြိုင်နေကြသော အုပ်စုအားလုံးက မဖြစ်မအနေ ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်ဟူသော ဘုံမြင်ကွင်းကို တည်ဆောက်နိုင်ကြရန်လိုသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် ရေရည်အကျိုးစီးပွားရှိမည်ကို ယုံကြည်လာအောင်အားထုတ်ကြရသည်။
အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးစနစ်များကြောင့်ဖြစ်စေ မျှတမှုကင်းမဲ့နေလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တည်ရန် မလွယ်ကူပေ။ ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ကြိုးစားရလေ့ရှိသည်။ ဆွဲဆောင်စည်းရုံးခြင်း (Persusasion) နှင့် အကြမ်းမဖက် ဆန့်ကျင်ရေးစွမ်းအားကို အသုံးပြုခြင်း (Non-Violent Power) နည်းစနစ်နှစ်ခုကို အများဆုံး အသုံးပြုလာကြသည်။
အောက်ပါအခြေအနေသုံးခုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆွဲဆောင်စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြုနိုင်သည်။
– သီလတရားတန်ဖိုးများဖြင့် ဆွဲဆောင်ခြင်း
– ကောင်းကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်ပုံကို ပြောဆိုစည်းရုံးခြင်း
– ကောင်းသတင်း သိက္ခာဖြစ်နိုင်ပုံကို ပြောဆိုစည်းရုံးခြင်း
၉။ သီလတရားတန်ဖိုးများဖြင့် ဆွဲဆောင်ခြင်း (Moral Values)
တိုက်ခိုက်အကြမ်းဖက်မှုသာမက ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများသည် မည်သည့်ပုံစံမဆို ကိုယ်ကျင့်သီလတန်ဖိုးများနှင့် ဆန့်ကျင့်မြဲဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အကြမ်းဖက်မှုတို့သည် ကိုယ်ကျင့်သီလဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်သည်ဟု ပြောဆိုကာ သတိပေးဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ မိမိတစ်သက်တာအတွက်သာမက နောင်မျိုးဆက် အတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမှ သီလရှိရာရောက်မည်ဟု သတိပေးဆွဲဆောင်ခြင်းမျိုးလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တာဝန်ရှိသူတို့၏အပြောနှင့် အလုပ် ကွာဟနေခြင်းမျိုးကိုလည်း သီလအမြင် ရှုထောင့်မှ သိစေအပ်သည်။
၁၀။ ကောင်းကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်ပုံကို ပြောဆိုစည်းရုံးခြင်း (Self-Interests)
အချို့အချို့သောကိစ္စများတွင် စွန့်လွှတ်လက်လျှော့မှုအားဖြင့်သာ ကောင်းကျိုးစီးပွားဆီသို့ ရောက်နိုင်သည်ဟူသော သဘောကို အုပ်ချုပ်သူ၊ တာဝန်ရှိသူများမြင်သာလာစေရန် ပြောဆိုရသည်။ အခြေအနေတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေမှုကို ထောက်ပြရသည်။ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုဖြင့် လက်ရှိတွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပျက်ယွင်းနေသော နိုင်ငံတစ်ခုကို ဆက်ခံရမည့်သူ များထဲတွင် မိမိတို့သားသမီးများလည်းပါဝင်လိမ့်မည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ နိုင်ငံကောင်းအောင် တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် မိသားစုအကျိုးစီးပွားဖြည့် ဆည်းပေးပြီးသားဖြစ်သည်ဟု တွေးတောခံယူလာအောင် ဆွဲဆောင်ကြရသည်။
၁၁။ ကောင်းသတင်းသိက္ခာဖြစ်နိုင်ပုံကို ပြောဆိုစည်းရုံးခြင်း (Self-actualization)
ကောင်းရာကောင်းကျိုးပြုခြင်းဖြင့် ကောင်းသတင်း ကျော်စောမှုသည် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ထက် များစွာလာလွန်ခိုင်မာသည်ကို သိရှိလာအောင် ပြောဆိုစည်းရုံးကြရသည်။ ဘဝ အဓိပ္ပာယ် ရှိလိုသော် လူ့သဘာဝ၊ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝအောင်မြင်သည်ဟူသော ခံစားချက် ရရှိနိုင်ခြေတို့ကို ပြောဆိုစည်းရုံးကြရသည်။ လေ့လာချက်တစ်ခုတွင် အပေါ်စီးအာဏာ (Power over) ဖြင့် လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှားကြသူတို့သည် ပြည်သူနှင့်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရာမှ ပေါ်ထွက်သော ဩဇာ (Power with) ကို ဖန်တီးရယူသူတို့ထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး လက်မလွှတ်ရအောင် ကြိုးပမ်းခြင်းထက် အာဏာကို ခွဲဝေလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းက ပို၍လုံခြံကြွယ်ဝစေနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤအခြေအနေတို့ကို ထောက်ပြ ပြောဆိုစည်းရုံးကြရသည်။
ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုနည်းစနစ် ကျင့်သုံးရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကြီးမားစွာ ပါဝင်နေပြီး အာဏာကိုလည်း နိုင်ထက်စီးနင်း ချုပ်ကိုင်ထားသော အခြေအနေတွင် မလွယ်ကူတတ်ပေ။ အာဏာဖြင့် ကြောက်စိတ် (fear) သွတ်သွင်းထားသောကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောဆိုရန် ခက်ခဲနေခြင်း (သို့မဟုတ်) ကျယ်ပြန့်သောမတရားမှုတို့ကြောင့် ပြည်သူများအတွင်း (အနည်းဆုံးစိတ်အတွင်းကဖြစ်စေ) အမျက်ဒေါသ(Rage) ကြီးမားနေသော အခြေအနေမျိုးတွင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုအတွက် လမ်းစရာရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
၁၂။ မငြိမ်းချမ်းမှုကြောင့် ပေးဆပ်ရသည့်တန်ဖိုးများ အကြောင်းပြောဆိုခြင်း(Talking about Cost to Society)
မငြိမ်းချမ်းသည့်အခါ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်လုံးက ပေးဆပ်ထမ်းပိုးထားရသည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကြီးမားလှသည်။ ထိုစရိတ်ထဲတွင် ပြည်သူတို့၏ အသက်ဇီဝများ၊ ကလေးသူငယ်တို့၏ ဘဝနှင့်အနာဂတ်များပါဝင်သည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် အတ္တများ မာနများ၊ မုန်းတီးမှုများ၊ မိုက်မဲမှုများ၊ ပညာမဲ့ မှုများကြောင့် ထိုစရိတ်စကတို့ကို ဂရုမပြုတတ်ကြချေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများသည် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆိုပါ စရိတ်စကများကို ပြည်သူနှင့်ခေါင်းဆောင်တို့သိအောင် အားထုတ်ကြရသည်။
၁၃။ အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော တန်ဖိုးများဖော်ထုတ်ခြင်း(Universal Values)
လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျားမ မည်သို့ပင်ကွဲပြားခြားနားစေကာမူ အောက်ပါစံတန်ဖိုးများသည် လူ့အသိုက်အမြုံအတွင်းရှိ လူအားလုံးနှင့် အကျုံးဝင်စေရမည်။ သို့မှသာ ငြိမ်းချမ်းသည့် လူ့အသိုက်အမြုံတည်တောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
– လူသားအားလုံးသည် အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (Survival)
– အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ရေမြေတောတောင် သဘာဝ အခြေအနေကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်။ (Sustaining the Habitat)
– စိုးရွံ့ထိတ်လန့်ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိရမည်။ (Freedom from fear)
– သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုစုရုံးပိုင်ခွင့်တို့ရှိရမည်။ (Freedom of Information)
– ချို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်း၍ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အမိုးအကာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ စသည့် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံစေမမှုတို့ရှိရမည်။ (Freedom from want)
– လူသားတိုင်း မိမိတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်များ မဆုံးရှုံးစေရအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့် အခြေအနေများရှိရမည်။ ချိုးဖောက်သူများကို တုံ့ပြန်အရေးယူသည့်စနစ်ရှိရမည်။ (Right to be protected)
၁၄။ ယဉ်ကျေးမှုထုတ်ကုန်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး သတင်းစကားများ ဖော်ပြခြင်း (Expression in Cultural Products)
လူအများထံသို့ နေ့စဉ်ရောက်ရှိနေသော ယဉ်ကျေးမှု ထုတ်ကုန်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်အတွေးများ ပါရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ အမုန်းစကားများကို မကျယ်ပြန့်စေဘဲ မေတ္တာစကားများ ပြန့်ပွားအောင် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာထွက်ကုန်များက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားများကို ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေခြင်း Extensive Sharing နှင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုခြင်း Wide application တို့ဖြစ်ပေါ်နေအောင် အားထုတ်ကြရသည်။
၁၅။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးသော ပညာရေးတည်ဆောက်ခြင်း (Education for Peace)
ထင်ဟပ်သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်းစွမ်းရည် (Reflective Thinking) သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးသော ပညာရေးစနစ်တွင် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အစိတ်ပွင့်လင်းမှုရှိစေ၍ အယူအစွဲများ တစ်ဖက်သတ်အမြင်များကို ငြင်းပယ်နိုင်ရန် စဉ်စားတွေးတော သုံးသပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်လိုအပ်သည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်သည့် စွမ်းရည်မြင့်မားသည့် စွမ်းရည်လိုအပ်သည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်သည့် စွမ်းရည်မြင့်မားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ခေါင်းဆောင်တို့၏အဆုံးအဖြတ်နှင့် ဟောပြောချက်များနော်သို့ အတွေးမဲ့လိုက်ပါသွားခြင်းများ၊ အဆင်ခြင်မဲ့ အမိန့်နာခံခြင်းများ နည်းပါးလေ့ရှိသည်။ ပိတ်ဆို့မထားဘြ အခြေအနေ၊ အကြောင်းအရာအားလုံးကို လက်ခံစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ကျယ်ပြန့်သည့် စိတ်သဘောထားရရှိကာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု (Tolerance) ဟူသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အတွေးအမြင်၊ သဘောထား၊ အပြုအမူများကို လက်ခံအသိအမှတ်ပြုပေးခြင်း သဘောဖြစ်သည်။ Tolerance refers to the recognition and acceptance of the right of all individuals as well as group to have their own thoughts, opinions, attitudes, will and behavior. ဤစွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ပေးရန် ပညာရေးစနစ်က အဓိကကျလှသည်။
၁၆။ ဖွင့်ထားသော စိတ်နှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုမြင့်မားစေခြင်း (Open Mind)
မိမိယုံကြည်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေသော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရန် ဝန်လေးခြင်း၊ အထောက်အထားများရှိသည့်တိုင် မိမိယုံကြည်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင့်နေလျှင် လက်ခံရန်ငြင်းပယ်ခြင်းတို့သည် ပိတ်ဆို့ရပ်တန့်နေသော စိတ်၏ လက္ခဏာများဟု ဆိုသည်။ (Closed Mandedness)
ဖွင့်ထားသောစိတ်၊ လင်းပွင့်သောစိတ်ဖြစ်ရန်အတွက် အောက်ပါအခြေအနေ (၄)ခု လိုအပ်သည်။
– မိမိအယူအဆကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်း- တစ်နည်းအားဖြင့် ရှုထောင့်အမြင်ဖော်ထုတ်ခြင်း (Perspective giving)
– အခြားသူများ၏ အမြင်ကို နားထောင်လက်ခံစဉ်းစားခြင်း (Perspective taking) အခြားတစ်ဖက်မှ အမြင်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ်လည်း ပါဝင်သည်။
– ပေါင်းစပ်စုစည်း၍ အမြင်သစ်ဖော်ထုတ်ခြင်း (Generating Perspectives)
– အမြင်သစ်၊ အဖြေသစ်များကို လက်ခံအသုံးပြုခြင်း (Implementing)
၁၇။ အခြားတစ်ဖက်မှ ကြည့်ခြင်းနှင့်စာနာနားလည်ပေးခြင်း (Perspective Taking and Empathy)
အခြားတစ်ဖက်မှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစုအဖွဲ့များ၏ စိတ်ခံစားမှု နေရာမှနေ၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားလည်ပေးနိုင်စွမ်း Perspective taking သည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါလှသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးနိုင်မှသာ အခြားတစ်ဖက်၏ စိတ်ကူးခံစားမှု၊ စေ့ဆော်မှု၊ အတွေ့အကြုံ စသည့်အခြေခံ အကြောင်းတရားများကို နားလည်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းနှင့် စာနာနားလည်ပေးမှုအားဖြင့် အားလုံးတွင် ဘုံတူညီသော လူသားဖြစ်မှု တန်ဖိုးများ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကမှုများ၊ လိုအပ်ချက်များရှိသည်ကို သိရှိလာနိုင်သည်။ Perspective taking and empathy may also lead both to oerceive that they shareacommon humanity, as well as comm. Values, concerns and needs.
စာနာနားလည်မှုမှနေ၍ လက်တွေ့ကူးလူးဆက်ဆံမှုဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားသောအခါ အုပ်စုများအတွင်း ပဠိပက္ခပြေငြိမ်းရန် လမ်းပွင့်သွားသည်။
၁၈။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်ခံခြင်း (Mutual Acceptance)
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ တရားဝင်ဖြစ်စေခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း တို့မှနေ၍ အပြန်အလှန် လက်ခံမှုကို ရရှိစေနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်လက်ခံမှုသည် အရေးကြီးသောအဆင့်၊ အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တရားမဝင်ဖြစ်အောင် ပြောဆိုခြင်းများနှင့် လူအဖြစ်မှ လျှော့ချဆက်ဆံခြင်းများကို ရပ်တန့်ဖယ်ခွာလိုက်သည်ဟူသော သဘောဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆန်သော သဘောထားများ စတင်ဖြစ်တည်နေပြီဟူသော သင်္ကေတလည်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သိမြင်လက်ခံပေးပြီးသည့်နောက် တစ်ဦးအခြေအနေကို တစ်ဦးနားလည်ကာ အခြားတစ်ဖက်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ တန်ဖိုးများ၊ အစဉ်အလာများ၊ အတွေ့အကြုံများကို နားလည်သဘောပေါက်ပေးသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသည်။ အပေါ်ယံ လက်ခံမှုကို ကျော်လွန်၍ နားလည်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းသော ဆက်ဆံရေးသို့ ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားရလေ့ရှိသည်။
၁၉။ ကွဲပြားမှုကို လေးစား၍ တူညီမှုများကို အခြေပြုခြင်း (Respect for differences and focus on commonalities)
ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ကွဲပြားမှုများရှိသည်ကို လက်ခံ၍ လေးစားမှုကို ပြသသည်။ ကွဲပြားမှုများကို အာရုံစိုက်မနေဘဲ ဘုံတူညီမှုများအပေါ်တွင် အခြေပြု၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။
သတိပွုရမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ကြုပျတို့လုပျနိုငျတာတှေ
အောကျပါအခွအေနတေို့တှငျ သမိုငျးဖွဈရပျဆိုးမြား ပျေါပေါကျနိုငျသညျ့ ဘေးအန်တရယျ ရှိသညျ။
(၃) တရားလကျလှတျပွမူသူတို့ လှတျငွိမျးခှငျ့ရနခွေငျး
(၈) တဈဖကျစှနျးဆီတှငျ ရပျတညျလာကွခွငျးမြား
၁။ စဈ/ပွညျတှငျးစဈ ဖွဈပှားနခွေငျး
အာမနေီးယား ဂြီနိုဆိုကျသညျ ပထမကမ်ဘာစဈနောကျခံတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး၊ နာဇီတို့၏ မီးလောငျတိုကျသှငျးမှုသညျ ဒုတိယကမ်ဘာစဈနောကျခံတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ထို့နောကျပိုငျးတှငျမူ ဂြီနိုဆိုကျမြား၊ ကွီးမားသော သုတျသငျခမြှေုနျးမှုမြားသညျ ပွညျတှငျးစဈနောကျခံတှငျ အဖွဈမြားလာသညျ။ ဘော့စနီးယား၊ ရဝမျးဒါ၊ ဒါဖာ၊ သီရိလင်ျကာ၊ လဈဗြား၊ ဆီးရီးယားတို့သညျ နမူနာမြားဖွဈကွသညျ။
“ပထမကမ်ဘာစဈဖွဈနတေဲ့ အခွအေနကေ အာမေးနီးယားတှကေို ရှငျးပဈဖို့ တူရကီအစိုးရ စောငျ့နတေဲ့အှငျ့အရေးဖွဈနတေယျ” ဟု အာမေးနီးယား ဂြီနိုဆိုကျ(၁၉၁၅-၁၆)ကို မွငျတှေ့ မှတျတမျးတငျခဲ့သူ အမရေိကနျသံအမတျ ‘မျောဂနျ’ဆိုသူက ရေးသားခဲ့သညျ။ ‘ငွိမျးခမျြးတဲ့ ကာလမှာ မရနိုငျတဲ့ဖွဈနိုငျခွတှေေ အမြားကွီးကို စဈအတှငျးမှာရလာတော့မယျ’ဟု နာဇီ ခေါငျးဆောငျ ‘ဂိုးဘဲလျ’က သူ့နစေ့ဉျမှတျတမျး(၁၉၄၂- မတျလ)တှငျ ရေးသားခဲ့သညျ။ စဈပှဲဟူသညျ တရားဝငျလူသတျခှငျ့ရသော အခငျးအကငျြးဖွဈလရှေိ့သညျ။ တိုကျခိုကျရနျ ဆငျ့ချေါခံရသောအခါ ယဉျကြေးမှုစညျးဘောငျအတှငျးမှ ပွုမူကငျြ့ကွံပုံမြား ကြိုးပေါကျလေ့ ရှိသညျ။ ကငျြ့ဝတျစံနှုနျးမြား ကြိုးပေါကျပြောကျကှယျသညျသာမက အကွမျးဖကျသတျဖွတျမှုကို လကျခံခှငျ့ပွုသညျ့ အလအေ့ထမြားပါ အစားထိုးလာလရှေိ့သညျ။ စဈပှဲမြားတှငျ ‘ငါတို့၊ သူတို့’ သို့မဟုတျ ‘မိတျဆှေ၊ ရနျသူ’ဟူသော အကှဲအပွဲပိုမိုကွီးမားလာလရှေိ့သညျ။ ရနျသူကို လူအဖွဈမှ နေ၍ အရာဝတ်ထုအဖွဈ ရှလြေ့ားစပွေီး၊ ကငျြ့ဝတျစကျဝိုငျးအတှငျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားရနျ မလိုသူမြားအဖွဈ သတျမှတျကွမွဲဖွဈသညျ။
စဈပှဲကို ဦးဆောငျသူမြား၊ ဝါဒဖွနျ့ခြိရေးသမားမြားကလညျး အတှငျးရနျသူ၊ အပွငျရနျသူ ဟူသော စကားမြားဖွငျ့ ခြဲ့ထှငျဖျောပွလရှေိ့သညျ။ ခွိမျးခွောကျမှုမြားကို ခြဲ့ထှငျဖျောပွရာတှငျ သာမနျပွညျသူအရပျသားမြားပါ ရနျသူ့စာရငျးတှငျ ပါဝငျသှားတတျသညျ။
ထိုအခွအေနသေညျ ဂြီနိုဆိုကျသို့ ကူးပွောငျးရောကျရှိစသေညျ့ အဓိကအခွအေနမြေားထဲမှ တဈခုဖွဈသညျ။
ဖိနှိပျခံရသညျ့ အစုအဖှဲ့မြားအနနှေငျ့ အခွားရှေးခယျြစရာ မရှိတော့သောအခါ လကျနကျကိုငျ အငျအားစုမြားဆီသို့ ရှလြေ့ားရောကျရှိသှားတော့သညျ။ ထိုအခါအစိုးရ/စဈတပျ စသညျတို့၏ဖိနှိပျမှု ပိုမိုပွငျးထနျလာကာ အဆိုးကြော့သံသရာအဖွဈ ကွီးမားသော လူသတျပှဲမြား၊ ဂြီနိုဆိုကျမြားဆီသို့ ဦးတညျသှားတတျကွသညျ။
ဂှာတီမာလာနိုငျငံတှငျ စဈအစိုးရနှိပျကှပျခွငျးကို ပွငျးထနျစှာ ခံကွရသညျ့ ဒသေခံ မာယာလူမြိုးတို့သညျ တျောလှနျသညျ့ အဖှဲ့မြားနှငျ့ ပူးပေါငျးခဲ့ကွညျ့ဥပမာလညျးရှိသညျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှ အခွားနမူနာမြားစှာလညျးရှိသညျ။
ပွညျတှငျးစဈပှဲမြားတှငျ လကျယဉျသူအရပျသားမြား(တဈနညျးအားဖွငျ့) အကွမျးဖကျမှုကို စိတျလိုလကျရလုပျမညျ့ ပွညျသူ့စဈမြား၊ လူမိုကျအဖှဲ့မြား ကွေးစားမြားကိုလညျး ချေါယူသုံးစ ကွလရှေိ့သညျ။ ဤသညျမှာလညျး အကွမျးဖကျမှု ကယျြပွနျ့နကျရှိုငျးရနျ ထောကျကူသညျ့ လမျးကွောငျးဖွဈသညျ။
စဈဖွဈနသေောအခါ ရနျသူ့နယျမွသေူသော ရညျညှနျးခကျြမြားပျေါလာသညျ။ ထိုနယျမွေ တှငျ လကျဦးရနျ၊ အပွတျရှငျးရနျ အားလုံးကို သံသယထားရနျဟူသော အပွုအမူမြားဆီသို့ ဦးတညျသှားသညျ။ ထိုမှနေ၍ သိမျးကြုံးတိုကျခိုကျသတျဖွတျမှုမြားဆီသို့ ကူးပွောငျးသှား နိုငျပွနျသညျ။
စဈဖွဈနသေညျ့အခွအေနကေ ရှပွေ့ောငျးနရောခခြှငျ့၊ အငျအားဖွညျ့တငျးခှငျ့ရစသေညျ။ အရပျသားမြား၊ ပွညျသူ့စဈမြားကို လကျနကျတပျဆငျပေးနိုငျသညျ။ လုံခွုံရေးအကွောငျး ပွခကျြဖွငျ့ ဥပဒမြေား၊ လှတျလပျခှငျ့မြားကို ဆိုငျးငံ့ရနျ အခှငျ့အရေးရသညျ။ မီဒီယာကို အမှောငျခနြိုငျသညျ။ အထကျပါလုပျရပျမြားကို လုံခွုံရေးအတှကျ ပဲလဟေူ၍ ပွညျသူအမြားကပငျ လကျသငျ့ခံသညျ့ အခွအေနသေို့ ရောကျရှိနိုငျသညျ။ အရပျသားအစိုးရမြားသညျလညျး စဈခေါငျးဆောငျမြားကို နရောပေး၍ အရပျဖကျမှ စီမံခှငျ့ကို ကနျ့သတျရုတျသိမျးပေးခွငျးမြား ဖွဈလရှေိ့သညျ။
အနှဈခြုပျမှာ စဈ/ပွညျတှငျးစဈအခွအေနသေညျ စဈသားအရပျသားဟူသော မဉျြးကွောငျး ကို ပြောကျကှယျစသေဖွငျ့ အန်တရာယျကွီးလှသော အခွအေနဖွေဈသညျ။
အတိတျကာလတှငျ ပဋိပက်ခမြား၊ တငျးမာမှုမြားအား အငျအားဖွငျ့သာ ဖွရှေငျးခဲ့ပါက အနာဂတျအတှကျ စိတျအေးစရာမရှိလှပေ။ အတိတျတှငျ နှိပျကှပျဖွရှေငျး၍ အောငျမွငျခဲ့သညျ ဆိုလြှငျ ပို၍စိတျပူစရာဖွဈသညျ။ အခွားနညျးမြားဖွငျ့ အဖွရှောမညျ့အစား နှိပျကှပျသညျ့ နညျးလမျးဟောငျးကိုပငျ ဆကျသုံးဖှယျရှိသညျ။
အမှနျတှငျမူ နှိပျကှပျခံရ၍ ငွိမျသကျသှားခွငျးကို ပွလေညျသှားခွငျးဟု ယူဆ၍ ရနိုငျမညျ မဟုတျပေ။ နှိပျကှပျခံရသညျ့အဖှဲ့မြားသညျ တုံ့ပွနျနိုငျသညျ့အခှငျ့အရေးကို စောငျ့ကွမညျပငျ ဖွဈသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ ပိုမိုကွီးမားကယျြပွနျ့လာသော အကွမျးဖကျမှုမြားဆီသို့ ရောကျရှိသှားည နိုငျသညျ။
အကွမျးဖကျဖွရှေငျးမှုမြားနှငျ့ အလကေ့ခြွငျးပွဿနာသညျ ခေါငျးဆောငျပိုငျးတှငျသာမက အောကျခွအေထိပြံ့နှံလရှေိ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ အထကျညှနျကွားခကျြ သိသိသာသာ မရှိသေး စကောမူ အောကျခွတှေငျ အကွမျးဖကျရကျစကျမှုတို့ဖွဈပျေါနိုငျသညျ။
ကွီးမာသောအကွမျးဖကျမှုမြား ဖွဈပှားပွီးသညျ့နောကျတှငျ ထိုဖွဈရပျနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွညျသူအားလုံးတှငျ အမှတျရမှုပုံစံအမြိုးမြိုး ကနျြရှိနခေဲ့တတျသညျ။ ခေါငျးဆောငျမြားက ထိုအခွအေနကေို အသုံးခရြနျ ကွိုးပမျးရာမှလညျး အကွမျးဖကျမှုမြား တဈကြော့ပွနျလာ တတျသညျ။
၃။ တရားလကျလှတျပွုမူသူတို့ လှတျငွိမျးခှငျ့ရနခွေငျး
အကွမျးဖကျမှု၊ သတျဖွတျသုတျသငျမှုမြား ပျေါလာသညျ့အခါ အစိုးရက အရေးယူရမညျ။ ခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ ပွညျသူလူထုမှ ထိုသို့သောအပွုအမူမြားကို ဆနျ့ကငျြရပျတညျပေးကွရမညျ။ ထိုသို့သောအပွုအမူမြားကို ဆနျ့ကငျြရပျတညျပေးကွရမညျ။ ထိုသို့မဟုတျဘဲ အစိုးရကလညျး အရေးယူရနျ ပကျြကှကျ၊ ပွညျသူကလညျး မသိကြိုးကြှံပွုထားသောအခါ ပွဈမှုကြူးလှနျသူတို့မှာ လှတျငွိမျးခှငျ့ရနသေညျ့ အခွအေနမြေားဖွဈထှနျးလာသညျ။ “ငါတို့လညျးလှနျကြူးလို့ရတယျ” ဟူသော ယူဆခကျြမြား ပျေါလာနိုငျသညျ။ လှနျကြူးခဲ့သူတို့ကလညျး နောကျထပျအကွမျးဖကျရနျ ဝနျလေးလိမျ့မညျမဟုတျတော့။ ခံခဲ့ရသူတို့ကလညျး တရားမြှတမှုမရသညျ့အပျေါ ဒေါသနှငျ့ လကျစားခလြေိုစိတျကွီးစိုးနလေိမျ့မညျ။ တရားဥပဒမေစိုးမိုးခွငျးနှငျ့ အပွဈရှိသူတို့ လှတျငွိမျးခှငျ့ ရနသေညျ့ စနဈ၏ရလဒျသညျ ပိုမိုကွီးမားသော ပေါကျကှဲမှုမြားဆီသို့ ဦးတညျစတေော့သညျ။
မိမိလုပျရပျအတှကျ တာဝနျခံရနျမလို၊ အရေးယူအပွဈပေးခံရမညျကို စိုးရိမျးစရာ မလိုသညျ့အခါ လကျနကျ၊ အာဏာယန်တယားမှ ပုဂ်ဂိုလျမြားအနနှေငျ့ အစှနျးရောကျရနျ လှယျကူ သှားလရှေိ့သညျ။
၄။ အစှနျးရောကျ အယူဝါဒမြား အားကောငျးလာခွငျး
ကှနျမွူနဈဝါဒနောကျခံတှငျဖွဈခဲ့သော ကမ်ဘောဒီးယားဂြီနိုဆိုကျ၊ တူရကီအမြိုးသားရေး ဝါဒနောကျခံတှငျ ကွုံခဲ့ရပွီးဖွဈသညျ။
မညျသူတို့ကို နှိမျနှငျးရမညျ၊ မညျသူတို့ကို ကာကှကျရမညျဟူသော အာဏာပိုငျတို့၏ တှကျကိနျးမြားသညျ သူတို့စှဲကိုငျထားသော အယူဝါဒမြားမှ လာလရှေိ့သညျ။
အစှနျးရောကျအယူဝါဒဆိုရာတှငျ နိုငျငံရေးအယူဝါဒမြားသာမက ဘာသာရေး၊ လူမြိုးရေး အယူဝါဒမြားလညျးပါဝငျသညျ။ ကွုံတှနေ့ရေသော ပွဿနာမြား၏ လကျသညျတရားခံမှာ မညျသညျ့အုပျစုဖွဈသညျဟု တံဆိပျကပျပွလရှေိ့သော အယူဝါဒတိုငျးသညျ အကွမျးဖကျမှုကွီးမြား ဆီသို့ ဦးတညျသှားလရှေိ့ကွသညျ။
အယူဝါဒတို့တှငျ ထောကျခံသူ၊ ကနျ့ကှကျသူတို့ ရှိမွဲဖွဈသညျ။ မထောကျခံဆနျ့ကငျြသူမြား သို့မဟုတျ မိမိတို့၏ ဦးဆောငျမှုနောကျ မလိုကျသူမြားကို ရနျသူဟုသတျမှတျရနျလညျး မခဲယဉျး ပေ။ မိမိတို့အစုအဖှဲ့၏ သိမှတျပုံ(အမြိုး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒ)ကို ကာကှယျရမညျဟူ၍ လညျးကောငျး၊ မိမိအစုအဖှဲ့မြားသာရှိသညျ့ သီးသနျ့ကမ်ဘာတညျဆောကျရမညျဟူ၍လညျးကောငျး အစှနျးရောကျအယူဝါဒသမားမြားက ကွှေးကွျောလှုပျရှားလရှေိ့ကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အစှနျးရောကျအယူဝါဒနှငျ့ ရနျလိုတိုကျခိုကျမှုတို့ တှဲစပျလကျြရှိတတျသညျ။
အယူဝါဒရေးရာ ပွငျးထနျမှုက မညျသညျ့အကွောငျးကိစ်စကိုမဆို တငျးကပျြသညျ။ နယျနိမိတျသတျမှတျမှုပွုသညျ။ အကွောငျးအရာမြားတှငျ အဖွူအမညျးနှဈခုသာရှိသညျဟု ယူဆ သညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ အမ်ဘာတှငျဖွဈခဲ့သမြှ ဂြီနိုဆိုကျမြား၌ အယူဝဒါပွငျးထနျမှု၏ တှနျးအားမြား ပါဝငျသညျသာ ဖွဈသညျ။
၅။ အာဏာစနဈနှငျ့ အာဏာရှငျစရိုကျကွီးစိုးနခွေငျး
အာဏာရှငျအစိုးရနှငျ့ အာဏာရှငျစရိုကျဖကျသို့ ယိုငျသညျ့အစိုးရမြားတှငျ စိတျလိုလကျရ အငျအားသုံးနိုငျသော အခှငျ့အရေးရှိနလေရှေိ့သညျ။ အငျအားနှငျ့အာဏာကို အထိနျးအကှပျ ပွုနိုငျသညျ့ အခွအေနေ မြားမြားစားစား မရှိပေ။
အာဏာကို ကနျ့သတျသညျ့ အနအေထားမရှိလေ ခေါငျးဆောငျနှငျ့အာဏာပိုငျလူတဈစု ထငျရာစိုငျးရနျ အခှငျ့အရေးရလဖွေဈသညျ။ ထို့အပွငျ အာဏာရှငျစနဈတိုငျးသညျ ကြိုးနှံနာခံ သော ဗြူရိုကရစေီယန်တယားကို တညျထောငျလရှေိ့သညျ။ သကျဆိုငျရာ အစိတျအပိုငျးအလိုကျ ခှဲဝလေုပျကိုငျသညျမှာ ဗြူရိုကရစေီသဘော သဘာဝဖွဈသညျ။ ကွီးမားသညျ့ ဆုတျယုတျမှုမြားကို ပငျဖွဈစေ သကျဆိုငျရာကဏ်ဍအလိုကျ လုပျကိုငျစသေညျ့အခါ ငွငျးဆိုခုခံမှုနညျးသှားသညျ။ ဗြူရိုကရစေီသညျ လူတို့၏ကိုယျကငျြ့သီလကို အိပျဆေးကြှေးရနျ အထောကျအပံ့ပွုသညျ။ (Bureaucracy Provides the moral sleeping pills) ဟုပငျ ရညျညှနျးကွသညျ။ အာဏာရှငျစနဈသညျ ဤအခွအေနကေို အသုံးခြ၍ ဆိုးယုတျမှုမြား ဖနျတီးလရှေိ့သညျ။
ဆကျစပျနသေော အခွအေနတေဈခုမှာ အာဏာရှငျမှ ဒီမိုကရစေီသို့ အကူးအပွောငျး တှငျလညျး အန်တရာယျမြားတတျခွငျးဖွဈသညျ။ အာဏာကို ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဆကျလကျခြုပျကိုငျ လိုသောအခါ၊ အကြိုးစီးပှားမြားကို ကာကှယျလိုသောအခါ၊ အထကျစီးရသောလူတနျးစားသညျ ပုံစံနှဈမြိုးဖွငျ့ တုံ့ပွနျကွသညျကိုတှရေ့သညျ။ တဈမြိုးမှာ အကွမျးဖကျမှုမြား ဖနျတီးကာ ရှုပျထှေးစသေညျ့နညျးဖွဈသညျ။ အခွားတဈမြိုးမှာ လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေးခေါငျးစဉျဖွငျ့ အငျအားတညျထောငျခွငျးဖွဈသညျ။ နှဈခုလုံးမှာပမာဏ ကွီးမားသော အကွမျးဖကျမှုဆီ တိုးဝငျသှားမညျ့အန်တရာယျရှိသညျ။
တဈဦးတဈယောကျ၏ လကျထဲတှငျ အာဏာစုပွုံနပွေီး ထိုသူက အခွားသောလူမြိုး၊ အစုအဖှဲ့တို့ကို မုနျးတီးသူဖွဈနသေောအခါ သုတျသငျရှငျးလငျးမှုမြားဖွဈလာမညျ့ အန်တရာယျကွီး လာသညျ။
၆။ ခှဲခွားဆကျဆံသညျ့ မူဝါဒမြားကငျြ့သုံးခွငျး
အခြို့သော လူအစုအဖှဲ့မြားကို မိမိတို့၏ကိုယျကငျြ့ တရားစံနှုနျးအတှငျး ထညျ့သှငျး စဉျးစားရနျမလို။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ထိုသူတို့၏ဖွဈတညျမှုကို ထညျ့တှကျရနျမလို။ ဖယျထုတျ ဖယျရှားထားရမညျ။ နရောပေး၍ မရဟူသော ခှဲခွားဆကျဆံသညျ့မူဝါဒမြား အရှိနျမွငျ့လာလြှငျ အကွမျးဖကျမှုမြား ပျေါပေါကျလာနိုငျသညျ။ အထူးသဖွငျ့ လူမြားစုက ခှဲခွားဆကျဆံမှုကို ဖွဈသငျ့သညျဟု ယုံကွညျနကွေသညျ့အခါ နိုငျငံရေးအရ ထောကျခံမှုရရနျအတှကျ ခေါငျးဆောငျ မြားသညျ တဈဖကျသတျဖိနှိပျမှုမြားကို ပွုလာနိုငျသညျ။ ခှဲခွားခံရသူဖကျက အကွမျးဖကျ တုံ့ပွနျသောအခါတှငျလညျး ထိုတုံ့ပွနျမှုထကျ အဆမြားစှာပိုကွီးသော အငျးအားဖွငျ့ တုံ့ပွနျမှုမြား ဖွဈပှားနိုငျသညျ။
ခှဲခွားဆကျဆံသညျ့ မူဝါဒမြားကငျြ့သုံးသညျ့အခါ ထိုမူဝါဒမြားကို အငျအားဖွငျ့ သှတျသှငျး အကောငျအထညျဖျောကွရသညျ။ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမှသညျ အကွမျးဖကျမှုသို့ အလှယျတကူ ကူးပွောငျးရနျ မခကျခဲလှပေ။
ခှဲခွားဆကျဆံသညျ့မူဝါဒမြားဖွငျ့ လူမြားကွိုကျ ထောကျခံမှုကို ရနိုငျသညျ့အခါ နိုငျငံရေး အငျအားစုမြားသညျ တိုကျရိုကျ သို့မဟုတျ သှယျဝှိုကျ၍ ထိုမူဝါဒမြားကို အားပေးကွသညျ။ ရလဒျမှာ ခှငျ့တူညီမြှမဟုတျတော့ဘဲ လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံး ပုံပကျြလာခွငျးဖွဈသညျ။ အစိုးရက ဦးဆောငျ၍ ခှဲခွားဆကျဆံမှုကငျြ့သုံးသော နိုငျငံဖွဈလာသညျ။
အခွခေံအားဖွငျ့ ခှဲခွားဆကျဆံမှုသညျ ဖယျထုတျစဉျးစားသညျ့ ပုံစံပငျဖွဈသညျ ဖယျထုတျစဉျးစားမှုမှသညျ ဖယျထုတျရှငျးလငျးသုတျသငျသညျ့ အဆငျ့သို့ ရောကျရှိလကျြရှိသညျ။
ခှဲခွားဆကျဆံမှုကွီးမားသော လူ့အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ မကနြေပျမှုမြား မခံအရပျနိုငျမှုမြား ကယျြပွနျ့နမေညျသာဖွဈသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ ပွငျးထနျဆိုးရှားသော အကွမျးဖကျမှုမြား ပျေါပေါကျနိုငျသညျ့ ရခေံမွခေံဖွဈနလေိမျ့မညျ။
၇။ စီးပှားရေးနှငျ့ ဆကျစပျပွဿနာမြား
စီးပှားရေးနှငျ့ ကုနျသှယျရေးကဆြငျးမှု ဆငျးရဲခမျြးသာကှာဟပျမှု ကွီးမားခွငျးတို့ကွောငျ့ ပွညျသူလူထုအတှငျး မကနြေပျခကျြမြား ပျေါပေါကျလာနိုငျသညျ။ ထိုမှတဈဆငျ့ နိုငျငံရေးမတညျငွိမျမှု ဖွဈလာသောအခါ အာဏာပိုငျတို့က မညျသူ့ကွောငျ့ အမညျဝါကွောငျ့ဟု လကျညှိထိုး တရားခံရှာလရှေိ့သညျ။ အကပျြအတညျးတှငျ စီးပှားရေး၊ နိုငျငံရေး၊ ဖှဲ့စညျးပုံမြားကို စဉျချေါသညျ့ အောကျခွလှေုပျရှားမှုမြား ပျေါပေါကျလာတတျသညျ။ ရံဖနျရံခါ လူမြိုးရေးနှငျ့ လူတနျးစားအကွမျးဖကျမှုသို့ ပွောငျးလာတတျသညျ နိုငျငံရေးသမားမြားက ထိုအခွအေနကေို အသုံးခခြွငျး၊ လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကွမျးဖကျမှုဖွငျ့ လမျးလှဲခွငျးသညျလညျး ဖွဈလကျြရှိသညျ။
စီးပှားရေးကဆြငျးမှုသညျ နိုငျငံရေးမတညျငွိမျမှုနှငျ့ဆကျစပျလကျြရှိသညျ။ နိုငျငံရေး မတညျငွိမျမှုမှသညျ အကွမျးဖကျအာဏာခြုပျကိုငျရနျ ကွိုးပမျးမှုမြားဆီသို့ ဦးတညျတတျသညျ။
အခွားတဈဖကျတှငျးလညျး လူမြိုးစုတို့၏ စီးပှားရေးနှငျ့ သယံဇာတရပိုငျခှငျ့မြားကို ဖွညျ့နှိပျရာမှ ပဋိပက်ခမြားဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ။ ပွညျတှငျးစဈမြားတှငျ စီးပှားရေးနှငျ့ဆကျစပျ သောကိစ်စမြား ပါဝငျနတေတျသညျ။
၈။ တဈဖကျစှနျးဆီတှငျ ရပျတညျလာကွခွငျးမြား
ပုံမှနျအားဖွငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတို့တှငျ အစှနျးနှဈဖကျနှငျ့ လူနညျးစုနှငျ့အလယျတှငျ လူအမြားစုရှိနတေတျသညျ။ သို့မဟုတျ သဘောကှဲလှဲမှုမြား ရှိသျောလညျး အရေးကွီးကိစ်စမြားတှငျ သဘောတူကွသညျ့ ရှလြေ့ားပွောငျးလဲရပျတညျမှုမြား ရှိတတျသညျ။ တရားသဆေုပျကိုငျမှု မပွငျးထနျးသညျ့ သဘောကို ပွသညျ။
အထကျဖျောပွပါအခွအေနမှေသညျ လူအမြားစုက တဈဖကျစှနျးဆီတှငျ ရပျတညျ၍ ဘုံသဘောတူသညျ့ကိစ်စမြား နညျးပါးလာသညျ့အနအေထားကို သတိထားကွရသညျ။
အကွောငျးအရာတဈခုပျေါလာလြှငျ ထောကျခံသညျ သို့မဟုတျ ကနျ့ကှပျသညျဟူသော အသဆေုပျကိုငျရပျတညျခကျြသာရှိသညျ။ တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ ရနျသူဟူ၍ သဘောထားသညျ အဘယျကွောငျ့ ကနျ့ကှကျသငျ့ကွောငျး၊ အဘယျကွောငျ့ထောကျခံသငျ့ကွောငျး ဆှေးနှေးမှုမရှိ တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ ထိတိုကျတှကျလြှငျ (ဥပမာ-ထောကျခံဆန်ဒပွပှဲနှငျ့ ကနျ့ကှကျဆန်ဒပွပှဲ သှားဆုံမညျ့ကွလြှငျ) ကိုယျထိလကျရောကျ တိုကျခိုကျရနျသာ အသငျ့ဖွဈနသေညျ။ အစိုးရမြား၊ နိုငျငံရေးအငျအားစုမြားကလညျး မိမိတို့နောကျလိုကျမြား၏ အကွှငျးမဲ့နာခံမှုကို တောငျးဆို၍ အစှနျးရောကျမှုဆီ တှနျးပို့သညျ။ ဤသို့သော တဈဖကျစှနျးဆီတှငျ ရပျတညျလာခွငျး (Polarization) အခွအေနမြေားသညျ လူ့အဖှဲ့အစညျးကို အကွမျးဖကျပေါကျကှဲမှုမြားဆီ ဆှဲချေါသှားတတျသညျ။
ပွိုငျဖကျအုပျစုမြားသညျလညျး မိမိတို့ကဲ့သို့ပငျ လူသားမြားဖွဈကွသညျ။ ထိုသူတို့၏တရားဝငျဖွဈမှုကို အသိအမှတျပွုရမညျဟူသော ခံယူခကျြသညျ ငွိမျးခမျြးရေးတညျဆောကျရနျ လမျးစဖွဈသညျ။ ဘာသာ၊ လူမြိုး၊ ယဉျကြေးမှုကှဲပွားခွငျးမြားရှိသျောလညျး လူသားဖွဈခွငျးဟူသော တူညီသညျ့သဘောကို လကျခံကွရမညျဖွဈသညျ။ မိမိတို့ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျး တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ တရားမဝငျဖွဈအောငျ ပွောဆိုခွငျးမြား၊ လူအဖွဈအမွငျနိုငျအောငျ ပွောဆိုခွငျးမြားကို ငွိမျးခမျြးရေးလှုပျရှားသူမြားအနနှေငျ့ စောငျ့ကွညျ့သတိပေးနရေမညျဖွဈသညျ။
ငွိမျးခမျြးရေးတညျဆောကျရာတှငျ အုပျစုတဈခုနှငျ့ တဈခုအကွား တနျးတူညီမြှ အခှငျ့အရေးရကွစရေနျ ဆောငျရှကျကွရသညျ။ အညီအမြှပွုမူ ဆကျဆံခံရသညျဟု ခံစားနိုငျကွရနျဟူသညျ အုပျစုတဈခုကနေ အပျေါစီးကနေ၍ ပွုမူဆကျဆံနမြှေ ခြောမှသေ့ော ဆကျဆံရေးဖွဈရနျ မလှယျကူပေ။
အခွားတဈဖကျမှ အုပျစုသညျ မိမိတို့အုပျစုကဲ့သို့ပငျ အမြိုးမြိုးအစားစားသော လူမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ။ သဘောထားပြော့ပွောငျးသူမြားရှိသလို၊ သဘောထားတငျးမာသူမြားလညျး ရှိနိုငျသညျ။ အခွားအုပျစုကို ရှုမွငျသောအခါ တဈသှေးတဈသံ၊ တဈပုံစံတညျးဟု ကောကျခကျြမဆှဲမိရနျ လိုသညျ။ အခွားအုပျစုမှ တဈစုံတဈယောကျ၏ လုပျရပျသညျလညျး အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးကို ကိုယျစားပွုခွငျး ရှိမရှိ ဝဖေနျထောကျရှုရနျလိုသညျ။ မညျသို့သော အခွအေနတှေငျပငျဖွဈစေ အခွားအုပျစုတှငျ မိမိတို့ကဲ့သို့ပငျ ငွိမျးခမျြးရေးဖှရှောလိုသူမြားရှိမညျကို တှေးဆဆျောဩရနျလိုသညျ။
အခွားတဈဖကျမှအုပျစုသညျ လူမဟုတျသူမြား၊ လူအဖွဈအသိအမှတျမပွုထိုကျသူမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသော လူသားအစုအဖှဲ့ဟု ပွောငျးလဲရှုမွငျနိုငျရမညျ။ အခွားအုပျစုသညျ မိမိတို့ကဲ့သိုပငျ မိခငျမြား၊ သားသမီးမြား စသညျ့ လူသားဆနျမှု အစုအဝေးကွီးဖွဈသညျ။ မိမိတို့အုပျစုကဲ့သို့ပငျ ဆိုးမိုကျသူခွှငျးခကျြမြားလညျး ရှိလိမျ့မညျ။ ပဠိပက်ခပွငျးထနျသော ကာလအတှငျး ပွငျပအုပျစုမြားကို တရားမဝငျဖွဈစခွေငျး၊ လူအဖွဈမှလြောကစြခွေငျး၊ တဈပုံစံတညျး တဈစုတဈဖှဲ့တညျးဟု မွငျခွငျး၏အကြိုးဆကျမှာ တဈဖကျအုပျစု၏ လူသားဆနျသော ဖွဈတညျးမှုမြားကို မလြေ့ော့ကာ ခမြှေုနျးရမညျ့ရနျသူဟူသော အမွငျခိုငျမာလာတတျခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုအမွငျမြားကို တဈဆငျ့ခငျြးပွောငျးလဲပွုပွငျ၍ လူသားဂုဏျရညျပွနျလညျမြှဝရေနျ လိုအပျသညျ။
၅။ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျခွငျး (Trust)
ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရာတှငျ အဓိကအခကျအခဲမှာ မိမိယုံကွညျမှုကို အလှဲသုံးစားပွု၍ အမွတျထုတျခံရမညျ့ အန်တရာယျဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ အဖကျဖကျမှ ယုံကွညျမှုဖွငျ့ လကျကမျးမှု မပွုမခငျြး ငွိမျးခမျြးရေးအဖွရှောရနျ မလှယျကူနိုငျပေ။ အတျောအတနျအန်တရာယျရှိသျောလညျး ကွီးကွီးမားမားထိခိုကျနိုငျခွမေရှိလြှငျ မိမိဖကျမှစတငျ၍ ယုံကွညျမှု ကမျးလှမျးတညျဆောကျရနျ အကွံပွုလရှေိ့ကွသညျ။ တဈဆငျ့ခငျြး တဈဆငျ့ခငျြး ထိတှေ့ ဆကျဆံမှုမှနေ၍ ကယျြပွနျ့သောယုံကွညျမှု တညျဆောကျသညျ့ အဆငျ့သို့ ရောကျရှိနိုငျသညျ။
ယုံကွညျမှုဟူသညျမှာ တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ ကောငျးမှနျစှာ ပွုမူဆကျဆံလိမျ့မညျဟူသော မြှျောလငျ့ခကျြဖွဈသညျ။ လုံးလုံးလြားလြား ယုံကွညျမှုဟူသညျမှာ ပွငျပအုပျစုအနနှေငျ့ အနာဂတျတှငျလညျး မိမိတို့ကို ကောငျးမှနျစှာ ပွုမူဆကျဆံလိမျ့မညျဟု ယုံကွညျနိုငျသောအခါတှငျ ဖွဈတညျနိုငျသညျ။ အပွနျအလှနျအားဖွငျ့လညျး ပွငျပအုပျစုက မိမိတို့အပျေါ အရှညျသဖွငျ့ ကောငျးမှနျစှာ ပွုမူဆကျဆံလိမျ့မညျဟု မမြှျောလငျ့နိုငျသညျ့အခါတှငျ ရရှေညျတညျသော ယုံကွညျမှုကို မရနိုငျပါ။
ပိုကောငျးသညျ့အနာဂတျ ဖွဈတညျနိုငျသညျဟူသော မြှျောလငျ့ခကျြရှိမှသာ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ညှိနှိုငျးနိုငျကွမညျဖွဈသညျ။ မြှျောလငျ့နိုငျခွရှေိမှမှသာ တီထှငျဖနျတီးမှု၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရ ပွလြေော့မှု အခွအေနသေဈမြားဆီသို့ စမျးသပျလြှောကျလှမျးလိုမှု စသညျ့အခွအေနမြေား ပျေါထှကျလာနိုငျမညျ။
မြှျောလငျ့ခကျြဖွဈတညျသောအခါ ပစ်စုပ်ပနျတှငျ ပါရှိခဲ့သညျ့ အခွအေနတေို့နှငျ့ပါ ကှဲပွားသညျ့ တှေးကနျြဆောငျရှကျနိုငျစှမျးကို ရှိစသေညျ။ Hope enbles people to imagineafuture that is differend from the past and presend.
လကျရှိအခွအေနတေို့သညျ မညျသို့မြှပွောငျးလဲနိုငျစရာ မရှိဟူသော မြှောကျလငျ့ခကျြမဲ့သညျ့စိတျဝငျရောကျသှားသောအခါ အမြားပွညျသူတို့သညျ တဈစုံတဈရာတှနျးတိုကျ လှုပျရှားမှုပွုရနျ စိတျမထကျသနျတော့ခြေ။ ထိုအခွအေနမြေိုးတှငျ ဖွဈနိုငျခွရှေိသညျ့ အနာဂတျမြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့ နိုးထလှုပျရှားလာအောငျ ဆျောဩကွရသညျ။
၇။ ဘုံမွငျကှငျးအနာဂတျသဈကိုတညျဆောကျခွငျး(Creating New Common Vision)
ဖကျပွိုငျနကွေသော အုပျစုအားလုံးက မဖွဈမအနေ ငွိမျးခမျြးရေးရမညျဟူသော ဘုံမွငျကှငျးကို တညျဆောကျနိုငျကွရနျလိုသညျ။ ငွိမျးခမျြးစှာ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျခွငျးဖွငျ့ နှဈဦးနှဈဖကျအတှကျ ရရေညျအကြိုးစီးပှားရှိမညျကို ယုံကွညျလာအောငျအားထုတျကွရသညျ။၈။ တရားမြှတမူဖွဈတညျအောငျဆှဲဆောငျစညျးရုံးယူခွငျး(Persusasion)
အုပျခြုပျသူလူတနျးစားကွောငျ့ဖွဈစေ၊ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေးစနဈမြားကွောငျ့ဖွဈစေ မြှတမှုကငျးမဲ့နလြှေငျ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈတညျရနျ မလှယျကူပေ။ ထိုသို့သော အခွအေနမြေားတှငျ ဖှဲ့စညျးပုံဆိုငျရာ၊ ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုမြားကို ရပျတနျ့ပွောငျးလဲနိုငျရနျ ကွိုးစားရလရှေိ့သညျ။ ဆှဲဆောငျစညျးရုံးခွငျး (Persusasion) နှငျ့ အကွမျးမဖကျ ဆနျ့ကငျြရေးစှမျးအားကို အသုံးပွုခွငျး (Non-Violent Power) နညျးစနဈနှဈခုကို အမြားဆုံး အသုံးပွုလာကွသညျ။
အောကျပါအခွအေနသေုံးခုအပျေါ အခွခေံ၍ ဆှဲဆောငျစညျးရုံးရေး လှုပျရှားမှုမြား ပွုနိုငျသညျ။
– သီလတရားတနျဖိုးမြားဖွငျ့ ဆှဲဆောငျခွငျး
– ကောငျးကြိုးစီးပှားဖွဈနိုငျပုံကို ပွောဆိုစညျးရုံးခွငျး
– ကောငျးသတငျး သိက်ခာဖွဈနိုငျပုံကို ပွောဆိုစညျးရုံးခွငျး
၉။ သီလတရားတနျဖိုးမြားဖွငျ့ ဆှဲဆောငျခွငျး (Moral Values)
တိုကျခိုကျအကွမျးဖကျမှုသာမက ဖှဲ့စညျးပုံအားဖွငျ့ အကွမျးဖကျမှု၊ ယဉျကြေးမှုအားဖွငျ့ အကွမျးဖကျမှုမြားသညျ မညျသညျ့ပုံစံမဆို ကိုယျကငျြ့သီလတနျဖိုးမြားနှငျ့ ဆနျ့ကငျြ့မွဲဖွဈသညျ။ ဤသို့သော အကွမျးဖကျမှုတို့သညျ ကိုယျကငျြ့သီလဖောကျဖကျြကြူးလှနျရာရောကျသညျဟု ပွောဆိုကာ သတိပေးဆှဲဆောငျနိုငျသညျ။ မိမိတဈသကျတာအတှကျသာမက နောငျမြိုးဆကျ အတှကျပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးမှ သီလရှိရာရောကျမညျဟု သတိပေးဆှဲဆောငျခွငျးမြိုးလညျး ပွုလုပျနိုငျသညျ။ တာဝနျရှိသူတို့၏အပွောနှငျ့ အလုပျ ကှာဟနခွေငျးမြိုးကိုလညျး သီလအမွငျ ရှုထောငျ့မှ သိစအေပျသညျ။
၁၀။ ကောငျးကြိုးစီးပှားဖွဈနိုငျပုံကို ပွောဆိုစညျးရုံးခွငျး (Self-Interests)
အခြို့အခြို့သောကိစ်စမြားတှငျ စှနျ့လှတျလကျလြှော့မှုအားဖွငျ့သာ ကောငျးကြိုးစီးပှားဆီသို့ ရောကျနိုငျသညျဟူသော သဘောကို အုပျခြုပျသူ၊ တာဝနျရှိသူမြားမွငျသာလာစရေနျ ပွောဆိုရသညျ။ အခွအေနတေဈခုနှငျ့တဈခု ဆကျနှယျပတျသကျနမှေုကို ထောကျပွရသညျ။ အကငျြ့ပကျြလာဘျစားမှုဖွငျ့ လကျရှိတှငျ ကိုယျကြိုးစီးပှားဖွဈနိုငျသျောလညျး ပကျြယှငျးနသေော နိုငျငံတဈခုကို ဆကျခံရမညျ့သူ မြားထဲတှငျ မိမိတို့သားသမီးမြားလညျးပါဝငျလိမျ့မညျ။ ထို့အတှကျကွောငျ့ ကိုယျကြိုးမကွညျ့ဘဲ နိုငျငံကောငျးအောငျ တညျဆောကျခွငျးအားဖွငျ့ မိသားစုအကြိုးစီးပှားဖွညျ့ ဆညျးပေးပွီးသားဖွဈသညျဟု တှေးတောခံယူလာအောငျ ဆှဲဆောငျကွရသညျ။
၁၁။ ကောငျးသတငျးသိက်ခာဖွဈနိုငျပုံကို ပွောဆိုစညျးရုံးခွငျး (Self-actualization)
ကောငျးရာကောငျးကြိုးပွုခွငျးဖွငျ့ ကောငျးသတငျး ကြျောစောမှုသညျ ကိုယျကြိုးစီးပှား ထကျ မြားစှာလာလှနျခိုငျမာသညျကို သိရှိလာအောငျ ပွောဆိုစညျးရုံးကွရသညျ။ ဘဝ အဓိပ်ပာယျ ရှိလိုသျော လူ့သဘာဝ၊ အသိအမှတျပွုခံရခွငျးဖွငျ့ ပွညျ့ဝအောငျမွငျသညျဟူသော ခံစားခကျြ ရရှိနိုငျခွတေို့ကို ပွောဆိုစညျးရုံးကွရသညျ။ လလေ့ာခကျြတဈခုတှငျ အပျေါစီးအာဏာ (Power over) ဖွငျ့ လုပျကိုငျလှုပျရှားကွသူတို့သညျ ပွညျသူနှငျ့လှုပျရှားဆောငျရှကျရာမှ ပျေါထှကျသော ဩဇာ (Power with) ကို ဖနျတီးရယူသူတို့ထကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အားနညျးသညျကို တှရေ့သညျ။ အာဏာကို ခြုပျကိုငျထားပွီး လကျမလှတျရအောငျ ကွိုးပမျးခွငျးထကျ အာဏာကို ခှဲဝလေကျဆငျ့ကမျးခွငျးက ပို၍လုံခွံကွှယျဝစနေိုငျစှမျးရှိသညျ။ ဤအခွအေနတေို့ကို ထောကျပွ ပွောဆိုစညျးရုံးကွရသညျ။
ဆှဲဆောငျစညျးရုံးမှုနညျးစနဈ ကငျြ့သုံးရေးသညျ အုပျခြုပျရေးတှငျ ကိုယျကြိုးစီးပှား ကွီးမားစှာ ပါဝငျနပွေီး အာဏာကိုလညျး နိုငျထကျစီးနငျး ခြုပျကိုငျထားသော အခွအေနတှေငျ မလှယျကူတတျပေ။ အာဏာဖွငျ့ ကွောကျစိတျ (fear) သှတျသှငျးထားသောကွောငျ့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ပွောဆိုရနျ ခကျခဲနခွေငျး (သို့မဟုတျ) ကယျြပွနျ့သောမတရားမှုတို့ကွောငျ့ ပွညျသူမြားအတှငျး (အနညျးဆုံးစိတျအတှငျးကဖွဈစေ) အမကျြဒေါသ(Rage) ကွီးမားနသေော အခွအေနမြေိုးတှငျ ဆှဲဆောငျစညျးရုံးမှုအတှကျ လမျးစရာရနျခကျခဲနိုငျသညျ။
၁၂။ မငွိမျးခမျြးမှုကွောငျ့ ပေးဆပျရသညျ့တနျဖိုးမြား အကွောငျးပွောဆိုခွငျး(Talking about Cost to Society)
မငွိမျးခမျြးသညျ့အခါ လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈလုံးက ပေးဆပျထမျးပိုးထားရသညျ့ ကုနျကစြရိတျမှာ ကွီးမားလှသညျ။ ထိုစရိတျထဲတှငျ ပွညျသူတို့၏ အသကျဇီဝမြား၊ ကလေးသူငယျတို့၏ ဘဝနှငျ့အနာဂတျမြားပါဝငျသညျ။ ရံဖနျရံခါတှငျ အတ်တမြား မာနမြား၊ မုနျးတီးမှုမြား၊ မိုကျမဲမှုမြား၊ ပညာမဲ့ မှုမြားကွောငျ့ ထိုစရိတျစကတို့ကို ဂရုမပွုတတျကွခြေ။ ငွိမျးခမျြးရေးလှုပျရှားသူမြားသညျ နညျးလမျးအမြိုးမြိုးဖွငျ့ အဆိုပါ စရိတျစကမြားကို ပွညျသူနှငျ့ခေါငျးဆောငျတို့သိအောငျ အားထုတျကွရသညျ။
၁၃။ အားလုံးနှငျ့သကျဆိုငျသော တနျဖိုးမြားဖျောထုတျခွငျး(Universal Values)
လူမြိုး၊ ဘာသာ၊ ကြားမ မညျသို့ပငျကှဲပွားခွားနားစကောမူ အောကျပါစံတနျဖိုးမြားသညျ လူ့အသိုကျအမွုံအတှငျးရှိ လူအားလုံးနှငျ့ အကြုံးဝငျစရေမညျ။ သို့မှသာ ငွိမျးခမျြးသညျ့ လူ့အသိုကျအမွုံတညျတောကျရနျ ဖွဈနိုငျခွရှေိသညျ။
– လူသားအားလုံးသညျ အသကျရှငျရပျတညျပိုငျခှငျ့ရှိသညျ။ (Survival)
– အသကျရှငျနထေိုငျရနျ ရမွေတေောတောငျ သဘာဝ အခွအေနကေို ဝိုငျးဝနျးထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျနိုငျရမညျ။ (Sustaining the Habitat)
– စိုးရှံ့ထိတျလနျ့ရခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့ရှိရမညျ။ (Freedom from fear)
– သတငျးအခကျြအလကျရပိုငျခှငျ့နှငျ့ လှတျလပျစှာပွောဆိုစုရုံးပိုငျခှငျ့တို့ရှိရမညျ။ (Freedom of Information)
– ခြို့တဲ့ဆငျးရဲခွငျးမှ လှတျကငျး၍ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ အမိုးအကာ၊ စားနပျရိက်ခာ စသညျ့ စိတျပိုငျးနှငျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွညျ့စုံစမေမှုတို့ရှိရမညျ။ (Freedom from want)
– လူသားတိုငျး မိမိတို့၏ လှတျလပျခှငျ့မြား မဆုံးရှုံးစရေအောငျ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးသညျ့ အခွအေနမြေားရှိရမညျ။ ခြိုးဖောကျသူမြားကို တုံ့ပွနျအရေးယူသညျ့စနဈရှိရမညျ။ (Right to be protected)
၁၄။ ယဉျကြေးမှုထုတျကုနျမြားတှငျ ငွိမျးခမျြးရေး သတငျးစကားမြား ဖျောပွခွငျး (Expression in Cultural Products)
လူအမြားထံသို့ နစေ့ဉျရောကျရှိနသေော ယဉျကြေးမှု ထုတျကုနျမြားတှငျ ငွိမျးခမျြးရေးသတငျးစကားမြား၊ ငွိမျးခမျြးရေးစိတျအတှေးမြား ပါရှိနရေနျလိုအပျသညျ။ အမုနျးစကားမြားကို မကယျြပွနျ့စဘေဲ မတ်ေတာစကားမြား ပွနျ့ပှားအောငျ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာထှကျကုနျမြားက ဆောငျရှကျပေးနိုငျသညျ။
ငွိမျးခမျြးရေးသတငျးစကားမြားကို ကယျြပွနျ့စှာဖွနျ့ဝခွေငျး Extensive Sharing နှငျ့ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုခွငျး Wide application တို့ဖွဈပျေါနအေောငျ အားထုတျကွရသညျ။
၁၅။ ငွိမျးခမျြးရေးကို အားပေးသော ပညာရေးတညျဆောကျခွငျး (Education for Peace)
ထငျဟပျသုံးသပျစဉျးစားခွငျးစှမျးရညျ (Reflective Thinking) သညျ ငွိမျးခမျြးရေးကို အားပေးသော ပညာရေးစနဈတှငျ အဓိကကသြော အစိတျအပိုငျးဖွဈသညျ။ အစိတျပှငျ့လငျးမှုရှိစေ၍ အယူအစှဲမြား တဈဖကျသတျအမွငျမြားကို ငွငျးပယျနိုငျရနျ စဉျစားတှေးတော သုံးသပျနိုငျသညျ့ စှမျးရညျလိုအပျသညျ။ စဉျးစားဆငျခွငျသညျ့ စှမျးရညျမွငျ့မားသညျ့ စှမျးရညျလိုအပျသညျ။ စဉျးစားဆငျခွငျသညျ့ စှမျးရညျမွငျ့မားသညျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတှငျ ခေါငျးဆောငျတို့၏အဆုံးအဖွတျနှငျ့ ဟောပွောခကျြမြားနျောသို့ အတှေးမဲ့လိုကျပါသှားခွငျးမြား၊ အဆငျခွငျမဲ့ အမိနျ့နာခံခွငျးမြား နညျးပါးလရှေိ့သညျ။ ပိတျဆို့မထားဘွ အခွအေနေ၊ အကွောငျးအရာအားလုံးကို လကျခံစဉျးစားခွငျးအားဖွငျ့ ကယျြပွနျ့သညျ့ စိတျသဘောထားရရှိကာ ငွိမျးခမျြးရေးတညျဆောကျမှုကို အထောကျအကူပွုနိုငျသညျ။ စိတျရှညျသညျးခံမှု (Tolerance) ဟူသညျ အခွားသူမြား၏ အခှငျ့အရေးနှငျ့ အတှေးအမွငျ၊ သဘောထား၊ အပွုအမူမြားကို လကျခံအသိအမှတျပွုပေးခွငျး သဘောဖွဈသညျ။ Tolerance refers to the recognition and acceptance of the right of all individuals as well as group to have their own thoughts, opinions, attitudes, will and behavior. ဤစှမျးရညျကိုတညျဆောကျပေးရနျ ပညာရေးစနဈက အဓိကကလြှသညျ။
၁၆။ ဖှငျ့ထားသော စိတျနှငျ့ ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျမှုမွငျ့မားစခွေငျး (Open Mind)
မိမိယုံကွညျခကျြ၊ ရပျတညျခကျြနှငျ့ ဆနျ့ကငျြနသေော သတငျးအခကျြအလကျမြားကို လကျခံရနျ ဝနျလေးခွငျး၊ အထောကျအထားမြားရှိသညျ့တိုငျ မိမိယုံကွညျခကျြနှငျ့ ဆနျ့ကငျြ့နလြှေငျ လကျခံရနျငွငျးပယျခွငျးတို့သညျ ပိတျဆို့ရပျတနျ့နသေော စိတျ၏ လက်ခဏာမြားဟု ဆိုသညျ။ (Closed Mandedness)
ဖှငျ့ထားသောစိတျ၊ လငျးပှငျ့သောစိတျဖွဈရနျအတှကျ အောကျပါအခွအေနေ (၄)ခု လိုအပျသညျ။
– မိမိအယူအဆကိုဖျောပွနိုငျခွငျး- တဈနညျးအားဖွငျ့ ရှုထောငျ့အမွငျဖျောထုတျခွငျး (Perspective giving)
– အခွားသူမြား၏ အမွငျကို နားထောငျလကျခံစဉျးစားခွငျး (Perspective taking) အခွားတဈဖကျမှ အမွငျကို အသိအမှတျပွုခွငျးဟူသော အဓိပ်ပာယျလညျး ပါဝငျသညျ။
– ပေါငျးစပျစုစညျး၍ အမွငျသဈဖျောထုတျခွငျး (Generating Perspectives)
– အမွငျသဈ၊ အဖွသေဈမြားကို လကျခံအသုံးပွုခွငျး (Implementing)
၁၇။ အခွားတဈဖကျမှ ကွညျ့ခွငျးနှငျ့စာနာနားလညျပေးခွငျး (Perspective Taking and Empathy)
အခွားတဈဖကျမှ လူပုဂ်ဂိုလျမြား၊ အစုအဖှဲ့မြား၏ စိတျခံစားမှု နရောမှနေ၍ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနားလညျပေးနိုငျစှမျး Perspective taking သညျ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အရေးပါလှသညျ။ ထိုသို့ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုပေးနိုငျမှသာ အခွားတဈဖကျ၏ စိတျကူးခံစားမှု၊ စဆေ့ျောမှု၊ အတှအေ့ကွုံ စသညျ့အခွခေံ အကွောငျးတရားမြားကို နားလညျနိုငျသညျ။ အခွားတဈဖကျမှ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုပေးခွငျးနှငျ့ စာနာနားလညျပေးမှုအားဖွငျ့ အားလုံးတှငျ ဘုံတူညီသော လူသားဖွဈမှု တနျဖိုးမြား၊ စိုးရိမျကွောငျ့ကမှုမြား၊ လိုအပျခကျြမြားရှိသညျကို သိရှိလာနိုငျသညျ။ Perspective taking and empathy may also lead both to oerceive that they shareacommon humanity, as well as comm. Values, concerns and needs.
စာနာနားလညျမှုမှနေ၍ လကျတှကေူ့းလူးဆကျဆံမှုဆီသို့ ပွောငျးလဲသှားသောအခါ အုပျစုမြားအတှငျး ပဠိပက်ခပွငွေိမျးရနျ လမျးပှငျ့သှားသညျ။
၁၈။ တဈဦးနှငျ့တဈဦး လကျခံခွငျး (Mutual Acceptance)
တဈဦးနှငျ့တဈဦး အသိအမှတျပွုခွငျး၊ တရားဝငျဖွဈစခွေငျး၊ ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျး တို့မှနေ၍ အပွနျအလှနျ လကျခံမှုကို ရရှိစနေိုငျသညျ။ အပွနျအလှနျလကျခံမှုသညျ အရေးကွီးသောအဆငျ့၊ အရေးကွီးသော ခွလှေမျးဖွဈသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ တဈဦးနှငျ့တဈဦး တရားမဝငျဖွဈအောငျ ပွောဆိုခွငျးမြားနှငျ့ လူအဖွဈမှ လြှော့ခဆြကျဆံခွငျးမြားကို ရပျတနျ့ဖယျခှာလိုကျသညျဟူသော သဘောဖွဈသညျ။ အပွုသဘောဆနျသော သဘောထားမြား စတငျဖွဈတညျနပွေီဟူသော သင်ျကတေလညျးဖွဈသညျ။
တဈဦးနှငျ့တဈဦး သိမွငျလကျခံပေးပွီးသညျ့နောကျ တဈဦးအခွအေနကေို တဈဦးနားလညျကာ အခွားတဈဖကျ၏ ရညျရှယျခကျြမြား၊ လိုအပျခကျြမြား၊ တနျဖိုးမြား၊ အစဉျအလာမြား၊ အတှအေ့ကွုံမြားကို နားလညျသဘောပေါကျပေးသညျ့အဆငျ့သို့ ရောကျရှိသညျ။ အပျေါယံ လကျခံမှုကို ကြျောလှနျ၍ နားလညျမှုဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးသော ဆကျဆံရေးသို့ ရောကျရှိအောငျ ကွိုးစားရလရှေိ့သညျ။
၁၉။ ကှဲပွားမှုကို လေးစား၍ တူညီမှုမြားကို အခွပွေုခွငျး (Respect for differences and focus on commonalities)
ငွိမျးခမျြးရေးယဉျကြေးမှုတှငျ တဈဦးနှငျ့တဈဦး၊ တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့ ကှဲပွားမှုမြားရှိသညျကို လကျခံ၍ လေးစားမှုကို ပွသသညျ။ ကှဲပွားမှုမြားကို အာရုံစိုကျမနဘေဲ ဘုံတူညီမှုမြားအပျေါတှငျ အခွပွေု၍ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရနျ ကွိုးပမျးသညျ။